नैतिक सुख्खापन र नफलेको संविधान « paniphoto
« मारिए बिन लादेन, रोकिएला मृत्युमा हास्ने कुचक्र ? ‘विश्वका मजदुर एक हौं’ »	नैतिक सुख्खापन र नफलेको संविधान
By -पानीफोटो- on Sunday May 01, 2011	-रामजी बलामी-
संविधान लेखनमा देखिएका विवादित मुद्दालाई टुंगोमा पु¥याउँनु भन्दा कुन दललाई कुन मन्त्रालय दिने भन्ने तारन्तार बैठक भए । सरकार निर्माण र मन्त्रालय बाँडफाँडका बिषयमा गोकर्ण रिसोर्टदेखि सिंहदरबारसम्म पटकपटक छलफल भएपनि संविधानसभा हल भित्र उपस्थिती जनाउँनसम्म सकेनन् । फलस्वरुप गणपुरक संख्या नपुगेर बैठक स्थगीत गर्नुपर्ने अवश्था आयो । यस्तो हुनमा साना देखि ठुला दलहरुले ससाना मागलाई समेत तेस्र्याएर रोस्ट्रम घेर्नु र अनेक बहानामा आन्दोलन गरेर संसद स्थगित गर्न बाध्य बनाउँनुले निर्धारित मितिमा संविधान बन्न नसकेको हो । आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनाउँने, बजेट ल्याउँने र देश विकासका नाममा व्यक्ति विकासको उद्देष्य राख्नुले नेपालको हालत झन्झन् ओरालो लाग्दै छ । सत्तामा नपुगुञ्जेल यो गर्ने र त्यो गर्ने भनेर आश्वासन बाड्न सिपालु नेताहरु चिल्ला कुर्सीमा पुग्ने बित्तिकै ती सब कुरा भुल्ने मात्रै होइन, आफ्नो छिमेकीलाई समेत चिन्दैनन् ।
रुने र कराउँने कथा रचेर चिल्ला कर्सीको राजनीति गरिदिँदा साढे दुई करोड नेपालीको भाग्य आज लथालिंग अवश्थामा पुगेको छ । जनताको संविधान बनाउँछौ भनेर शपथ लिई संविधानसभा छिरेका सभासदहरु बैठकमै उपस्थिती नहुनाले कतिपय सच्चा सभासदहरुको समेत बदनामी भएको छ । आलु गोदाममा एउटा आलु मात्रै बिग्रेको परे त्यसले सबै आलु बिगार्छ । ठिक त्यस्तै भयो हाम्रो संविधानसभाको हालत । अब कुरा रह्यो जेठ १४ पछि के हुने ?
« मारिए बिन लादेन, रोकिएला मृत्युमा हास्ने कुचक्र ? ‘विश्वका मजदुर एक हौं’ »	3 comments to नैतिक सुख्खापन र नफलेको संविधान
· जवाफ दिनुहोस्	यी गोरुहरु कहिले पनि सुध्रिदैनन् ।
कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?:00	विनोद हरियाली
· जवाफ दिनुहोस्	हामी जति कराए पनि यीनीहरुले सुने पो । कस्ता बहिरालाई पठाइएछ बा ,
कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?:00	aananda chaudhari
· जवाफ दिनुहोस्	go to hell savasad ho